फेसबुक र टिकटकमा समय खेर फाल्नुभन्दा यसो गर्ने कि ! « Janata Samachar
फेसबुक र टिकटकमा समय खेर फाल्नुभन्दा यसो गर्ने कि !
एजेन्सी । फेसबुक,ट्वीटर,इन्टाग्राम र टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरैका लागि लत नै बनिसकेको छ ।
यी सामाजिक सञ्जालबाट धेरथोर सूचना र जानकारीसँगै मनोरञ्जन प्राप्त गरे पनि धेरैले भने फोकटमा समय खेर गएको अनुभव गर्ने गर्दछन् । यदि तपाईलाई पनि यस्तै लाग्छ भने यी अनलाइनहरु अवश्य भिजिट गर्नुहोस्,जसले तपाईको समय सदुपयोग हुनुको साथै ज्ञान पनि बढ्नेछ ।
खान एकेडेमीका बारेमा धेरै नेपालीलाई थाहा नहुन सक्छ । तर विश्वका धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता माझ यो निकै लोकप्रिय प्लेटफर्मको रुपमा रहेको छ । यसको शुरुवात सलमान खान नामक एकजना भारतीय युवाले सन् २००६ मा गरेका थिए । उनले नयाँ नयाँ सिकाइको संस्कार फराकिलो बनाउने उदेश्यले यो अनलाइन प्लेटफर्मको विकास गरेका थिए । यो साइट विशेष गरी गणित,भौतिकशास्त्र र कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा रुची भएकाहरुका लागि हो ।
पज्जल क्वीजमा रुची भएकाहरुका लागि तयार पारिएको हो क्वेरा अनलाइन । यसमा शब्द मिलाउनेदेखि विभिन्न विषयका प्रश्नहरु राखिएका छन् । जसलाई मिलाउन र उत्तर दिन खुब मजा आउछ । यसबाट व्यक्तको शब्दभण्डार र सामान्य ज्ञान पनि बढ्छ । अर्थात यो अनलाइनमा रमाउनेहरुले समय खेर गएको अनुभूति गर्न पर्दैन ।
इन्डोनेसियामा ४५ हजार वर्ष पुरानो भित्तेचित्र भेटियो
एजेन्सी । इन्डोनेसियाको एक गुफामा ४५ हजार पाँच सय वर्ष पुरानो भित्तेचित्र भेटिएको छ ।
हाम्रो पात्रोबाटै च्याट, अडियो र भिडियो कलिङ सुविधा
काठमाडौं । नेपालको लोकप्रिय मोबाइल एप हाम्रो पात्रोले अनलाइन च्याट, अडियो र भिडियो कलिङ सेवा
आमा र छोरी दुवैलाई सँगै भगाएपछि…
युवककी प्रेमीका नाबालिग भएको भन्दै आमाले भगाउन दिएकी थिइनन् ।
यी चार साइटले फेसबुक र टिकटकको लत छुटाइदिन्छ
काठमाडौं । फेसबुक,ट्वीटर,इन्टाग्राम र टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरैका लागि लत नै बनिसकेको छ